केही आफ्नै कथा, ब्यथा अनि भावनाहरु: November 2009
Posted by मनु ठाडा मगर (MANU) at 4:48 AM2comments: Links to this post
यो भनि राख्नु पर्ने कुरा होइन कि एक्काईसौ सताव्दिको लागी अति आवश्यकिय कुरा मोवाइल फोन पनि एक हो । बिकसित जुन सुकै मुलुकमा होस वा नेपालमै पनि आजभोली मोवाइल फोन प्राय हरेक व्यक्तिको साथमा हुन्छ । आजको युगमा हरेक मानिसको लागी यो आधारभुत आवश्यकिय कुरा बन्न पुगेको छ । बाल, युवा तथा बृद्द बृद्दा जो सुकैको लागी पनि उपयोगी बनेको छ । कसैको लागी यो खेल्नको निमित्त कसैको लागी समाचार सुन्नको लागी कसैको लागी साथीभाई सँग किप इन टचमा रहनको लागी (SMS होस वा Phone call होस वा त Face book update र chat नै किन नहोस) त कसैको लागी यो एक अर्काको मनको कुरा साटासाट गर्नकै लागी ।
Posted by मनु ठाडा मगर (MANU) at 10:03 AM 1 comment: Links to this post
झण्डै दिउसोको तीन बजेको थियो । धराहराको छेउपार्कमा बसेर बहिनीहरु सँग कफि गफमा मस्त थियौ । बिशेष गरि केटाहरुले प्रयोग गर्ने One Polar झोला पछाडी बोकेर, अनटाइडी लुकअपमा उपस्थीत भइन शान्ता । मेरो, उनी सँगको लगभग पाँच बर्ष पछिको भेट थियो यो । एउटै गाँउ भए तापनि हामी त्यति धेरै नजिक थिएनौं । विदेश जानु भन्दा अगाडी खासै वोलचाल थिएन मेरो उनी सँग । तर पछि इन्टरनेट च्याटको माध्ययमले हामी केही नजिक भएका थियौ। यही च्याटिङकै क्रममा म नेपाल आउने र उनी सँग भेट्‍ने बाचा गरेको थिएँ र यहि बाचा पुरा गर्दै थिएँ मैले । निकै बेरको फोनमा स्थानको वर्णन पश्चात म सामु आइपुगेकी थिइन उनी । विनम्र साथ नमस्ते गरिन्‍ । बस न । मैले अनुरोध गरेँ । शान्ता बस्दै बहिनीहरु सँग पनि गफ गर्न थालीन्। के खान्छौ ? म त भखर खाजा खाएर आएको दाइ केही खान्न । होइन केही त खाँउ मैले अनुरोध गरे । तिमीहरु के खान्छौ ? ए कफि खाँउ है म कफि लिएर आउछु । सबैको सहमतिमा मैले मेरो लागी Triple strong कफि मागेँ । उनीहरुलार्इ पनि सर्भ गरिदिए । त्यतिकैमा मेरो लामो बाधेको केश हेर्दै शान्ता अलि अश्वभाविक देखिइन र बोलिन्।
Posted by मनु ठाडा मगर (MANU) at 8:21 AM3comments: Links to this post
थाङ (कथा) - गौरीघाट तबान स्योङनोन स्योङ नारानटार दोबा ग्यामरि पिङ माइक्रो बिमा स्यान चलब अताबासे सतान नाङ नाङ तमुबा । मित्रपार्कग्याम ग्युरु फाप्पान लमा गिक्खे खेप्प...
- मलाई उज्यालो मन पर्छ, घामको भएपनि जूनको भएपनि यात्रा आफ्नै उडान आफ्नै, धामको भएपनि धुनको भएपनि यी कुनै पनि ‘दरबार’संग साट्न सक्दिन म मेरो स्वतन्त्रता पिँजड...
यस्तो पनि - स्थान : स्वयम्भु चोक समय : दिउँसो को साढे तिन देखि सवा चार सम्म घट्ना १ सिम सिम पानी परिरहेको छ। छाता ओडेर म छोराको स्कूल बस कुरिरहेको छु। त्यसै बेला ए...